Ngabe iCDC isebenzela impilo yomphakathi, noma iCoca-Cola?
Imboni Yeziphuzo Ithola Umngane Ngaphakathi E-Ejensi Yezempilo yase-US
Posted on June 29, 2016 by UStacy Malkan
Lo mbhalo uqale washicilelwa ngu Huffington Post.
Kube unyaka onzima kwiBig Soda, abathengisi balezo ziphuzo ezibandayo ezinoshukela izingane (nabantu abadala) abathanda ukuzifaka.
Isinqumo sangoJuni 16 sabaholi bedolobha ePhiladelphia ukuphoqa “intela yesoda” njengendlela yokudikibala ukusetshenziswa kweziphuzo ezibonakala zingenampilo ukuphela kwezindaba zakamuva nje ezilandelanayo zezinkampani ezinjengeCoca-Cola nePepsiCo, eziye zabona ukuthengiswa kweziphuzo eziphuzayo kwehla kancane. Abatshalizimali abethukile baqhuba amasheya kulezo zinkampani eziphansi ngemuva kokuhamba kwePhiladelphia ukuqaphela lokho kodwa ubufakazi bamuva bokuthi abathengi, abenzi bomthetho kanye nochwepheshe bezempilo baxhuma iziphuzo ezinoshukela ezinhlobonhlobo zezinkinga zezempilo, kufaka phakathi ukukhuluphala kanye nohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2.
Ngonyaka odlule ISan Francisco yadlulisa umthetho edinga izikhangiso zeziphuzo ezinoshukela ukufaka izexwayiso mayelana nemiphumela emibi yezempilo engaba khona ehambisana nemikhiqizo.
Igalelo elibucayi lafika ngoJuni owedlule lapho uMqondisi Jikelele we-World Health Organisation (WHO) uMargaret Chan kusho ukumakethwa kweziphuzo ezinoshukela ogcwele kwaba nomthelela omkhulu ekukhuleni kokukhuluphala kwezingane emhlabeni wonke, ikakhulukazi emazweni asathuthuka. I-WHO ishicilele umhlahlandlela omusha kashukela ngoMashi 2015, kanti uChan uphakamise imikhawulo ekusetshenzisweni kwesiphuzo esinothe ngoshukela.
IMexico isivele isetshenzisiwe intela yayo yesoda ngo-2014, futhi amadolobha amaningi ase-US nasemhlabeni jikelele njengamanje acubungula imingcele enjalo noma izikhubekiso, njengezintela ezengeziwe, kanti ezinye sezivele zikwenzile lokho. Intela yesoda yaseMexico ihambisane nokwehla kokuthengwa kwesoda, ngokocwaningo olushicilelwe ekuqaleni konyaka.
Akumangazi ukuthi imboni yeziphuzo, ethola izigidigidi zamaRandi ngonyaka kusuka ekuthengisweni kweziphuzo ezithambile, ibilokhu yesaba - futhi ilwa nalokhu kushintshashintsha.
Kepha okumangazayo ngenye yezindawo lapho imboni yeziphuzo ifune khona, futhi ngokusobala yaluthola, usizo oluthile- - kusuka kwisikhulu esiphezulu seCenters for Disease Control and Prevention, inhloso yayo ngokwengxenye ukuvimbela ukukhuluphala, isifo sikashukela, nokunye Izinkinga zempilo.
Ukuxhumana nge-imeyili etholwe yi-US Right to Know ngohulumeni wenkululeko yolwazi ucela imininingwane yokuthi ummeli ohola phambili weziphuzo kanye nokudla ngonyaka owedlule ukwazile kanjani ukucela nokufaka kanye nokuholwa nguDkt.Barbara Bowman, umqondisi weCDC's Division for Heart Disease and Stroke Prevention, mayelana nendlela yokubhekana neWorld Health Organisation izenzo ezazilimaza imboni yeziphuzo.
UBowman uhola uphiko lweCDC olubhekene nokuhlinzeka "ngobuholi bezempilo bomphakathi" futhi usebenza nezifundazwe ukukhuthaza ucwaningo futhi Izibonelelo zokuvikela nokuphatha izinto ezinobungozi ezibandakanya ukukhuluphala, isifo sikashukela, isifo senhliziyo nesifo sohlangothi.
Kodwa ama-imeyili aphakathi kukaBowman no-Alex Malaspina, owayengumholi wezindaba zezesayensi nezomthetho weCoca-Cola futhi ongumsunguli we-International Life Sciences Institute (ILSI) exhaswa yimboni, akhombisa ukuthi uBowman naye ubonakale ejabule ukusiza imboni yeziphuzo ukuba ikhule kwezombusazwe I-World Health Organization.
Ama-imeyili avela ngonyaka ka-2015 abonisa ukuthi iMalaspina, emele izintshisekelo zeCoca-Cola kanye nomkhakha wezokudla, yafinyelela kanjani kuBowman ikhala ngokuthi iWorld Health Organisation ilinikeza ihlombe elibandayo iqembu elixhaswa ngezimali ngamakhemikhali nokudla elaziwa nge-ILSI, lelo Malaspina eyasungulwa ngo-1978. Izintambo ze-imeyili zifaka phakathi imibiko yokukhathazeka mayelana ne-Coca-Cola Life entsha ka-Coca-Cola, enziwe nge-stevia, kanye nokugxekwa ukuthi ibisenoshukela omningi kunomkhawulo wosuku onconywe yi-WHO.
Ama-imeyili afaka phakathi okubhekiswe kwikhwelo le-WHO lokuthola umthethonqubo owengeziwe ngeziphuzo ezibandayo ezinoshukela, bethi zinomthelela ekukhuleni kwamazinga okukhuluphala ezinganeni, futhi bakhala ngokuphawula kukaChan.
"Yimiphi imibono esingaba nayo ingxoxo neWHO?" Kubhala iMalaspina ku-imeyili kaJuni 26, 2015 kuBowman. Umthumelela intambo ye-imeyili ebandakanya abaphathi abaphezulu bakwaCoca-Cola kanye ne-ILSI futhi uzwakalise ukukhathazeka ngemibiko engemihle ngemikhiqizo enokuqukethwe okunoshukela omningi, nezinhlelo zentela kashukela ezinoshukela eYurophu. Kulayini we-imeyili, uMalaspina uthi izenzo ze-WHO zingaba "nemiphumela emibi kakhulu emhlabeni jikelele."
"Usongo ebhizinisini lethu lubucayi," kubhala uMalaspina ohlwini lwe-imeyili aluthumela kuBowman. Kulolu chungechunge lwama-imeyili kukhona uCoca-Cola oyiChief Affairs Public and Communications Officer uClyde Tuggle kanye noMphathi Wezobuchwepheshe kwaCoca-Cola u-Ed Hays.
Utshela uB Bowman ngqo ukuthi izikhulu ze-WHO "azifuni ukusebenza nezimboni." Futhi uthi: "Kufanele kwenziwe okuthile."
UBowman uphendula ngokuthi umuntu oneGates noma "Abantu baseBloomberg" angaba nokuxhumana okusondele okungavula umnyango ku-WHO. Ubuye asikisele ukuthi azame umuntu ohlelweni lwe-PEPFAR, uhlelo oluxhaswe nguhulumeni waseMelika elenza ukuthi imishanguzo ye-HIV / AIDS itholakale e-Afrika eseningizimu yeSahara. Umtshela ukuthi "I-WHO iyisihluthulelo senethiwekhi." Ubhala ukuthi "uzothintana ngokuhlangana."
Kokulandelayo Juni 27, 2015 imeyili, UMalaspina umbonga “ngomkhombandlela omuhle kakhulu” futhi uthi “singafuna ukuthi i-WHO iqale ukusebenza ne-ILSI futhi… nokuthi i-WHO ingagcini ngokubheka ukudla okunoshukela njengowukuphela kwembangela yokukhuluphala kodwa futhi ibheke nezinguquko zendlela yokuphila bezilokhu zenzeka kuyo yonke indawo. ” Ube esephakamisa ukuthi yena noBowman bahlangane esidlweni sakusihlwa kungekudala.
Iqiniso lokuthi isikhulu sezempilo sase-US esisezingeni eliphezulu sixhumana ngale ndlela nomholi wemboni yeziphuzo kubonakala kungafanele, ngokusho kukaMarion Nestle, umbhali wencwadi “Ezombusazwe Zesoda” kanye noprofesa wezokudla, izifundo zokudla, kanye nempilo yomphakathi eNew York University.
"Lawa ma-imeyili akhombisa ukuthi i-ILSI, iCoca-Cola, kanye nabaphenyi abaxhaswe ngabakwaCoca-Cola bane 'in' nesikhulu esivelele seCDC," kusho uNestle. "Lesi sikhulu sibonakala sinentshisekelo yokusiza la maqembu ukuba ahlele amaqembu aphikisayo ukuze" adle ushukela omncane "futhi" adalule izincomo zezimali zemboni ". Isimemo sedina sikhombisa ubudlelwano obumnandi… Lokhu kubonakala kokushayisana kwezintshisekelo yikho kanye ukuthi kungani izinqubomgomo zokuzibandakanya nomkhakha zidingeka kubaphathi bakahulumeni. ”
Kodwa okhulumela iCDC uKathy Harben uthe ama-imeyili awakhombisi ukungqubuzana noma inkinga.
"Akujwayelekile ukuthi iCDC ixhumane nabantu kuzo zonke izinhlangothi zodaba." Kusho uHarben.
URobert Lustig, uProfesa Wezingane e-Division of Endocrinology e-University of California, eSan Francisco, uthe i-ILSI “yisiqhema esiphambili embonini yezokudla.” U-Lustig uthe ukuthola kuyinto "ethokozisayo" ukuthi i-CDC kusamele ibhekane nokunciphisa ukusetshenziswa koshukela, yize i-WHO ikhathazekile ngokuxhumana nezifo. U-Lustig uqondisa uhlelo lwe-UCSF's WATCH (Isisindo Sokuhlola Impilo Yentsha Nengane), futhi ungumsunguli wesikhungo esingenzi nzuzo se-Institute for Responsible Nutrition.
Akekho uBowman noMalaspina abaphendulile ezicelweni zokuphawula.
Ku-imeyili kaFebhuwari 2015 kusuka eBowman kuya eMalaspina wabelana nge-imeyili ayeyitholile evela kwisikhulu se-USDA ngesihloko esithi "UKUBUYEKEZA KWAKHO: Izimiso Ezisalungiswa ezivela Emhlanganweni Wokubambisana Komphakathi Ozimele." I-imeyili evela kuDavid Klurfeld, umholi wohlelo lukazwelonke lokudla kwabantu ku-USDA's Agricultural Research Service, icaphune udaba oluvela ephephabhukwini lezokwelapha i-BMJ eligcizelela isidingo sobambiswano lukahulumeni / nolwangasese, yafaka nesilinganiso sokucashunwa "kwegagasi elinamandla lokungcwele emphakathini waseBrithani impilo. ” UBowman utshela iMalaspina: “Lokhu kungathakazelisa. Bheka izincwadi zeBMJ ikakhulukazi. ”
Ku-imeyili kaMashi 18, 2015 ukusuka eBowman kuya eMalaspina uthumele i-imeyili ephathelene nesinqubomgomo esisha sokunqanda ukusetshenziswa kukashukela emhlabeni jikelele akuthola kwi-World Cancer Research Fund International. IMalaspina ibe isabelana ngokuxhumana nezikhulu zeCoca-Cola nabanye.
Nge-imeyili ehlukile kaMashi 2015, UBowman uthumele iMalaspina ezinye izifinyezo zemibiko ye-CDC futhi wathi angayithokozela "imicabango kanye nokuphawula" kwakhe.
UBowman, ophethe iPhD kwezomsoco womuntu kanye nebhayoloji yokudla okunempilo, usebenze e-CDC kusukela ngo-1992, futhi uke wabamba izikhundla eziningi zobuholi eziphezulu lapho. Waqokwa njengomqondisi weDivision for Heart Disease and Stroke Prevention e-National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion e-CDC ngoFebhuwari 2013.
IMalaspina nayo ibinomsebenzi omude emkhakheni wayo wobungoti. Umakadebona weCoca-Cola usungule i-ILSI ngo-1978 ngosizo oluvela kuCoca-Cola, uPepsi nabanye abadlali bemboni yezokudla futhi wayiqhuba kwaze kwaba ngu-1991. ILSI ibe nobudlelwano obude nobusondelene neWorld Health Organisation, esebenza ngesikhathi esisodwa eduze kwayo Inhlangano Yezokudla Nezolimo (i-FAO) kanye ne-WHO's International Agency for Research on Cancer kanye ne-International Programme yezokuphepha kwamakhemikhali.
Kepha umbiko ngumxhumanisi ku-WHO ithole ukuthi i-ILSI yayifaka i-WHO ne-FAO nososayensi, imali kanye nocwaningo ukuze kutholakale ukuthandwa kwemikhiqizo namasu ezimboni. ILSI nayo yasolwa ukuzama ukubukela phansi i-WHO imizamo yokulawula ugwayi egameni lomkhakha kagwayi.
UWHO ugcine eseziqhelelanisa ne-ILSI. Kepha imibuzo ngethonya le-ILSI iphinde yaqubuka kule ntwasahlobo lapho ososayensi abasebenzisana ne-ILSI babambe iqhaza kwi ukuhlolwa kwe-herbicide herbicide glyphosate, ekhipha isinqumo esivuna iMonsanto Co. kanye nemboni yezibulala-zinambuzane.
UCarey Gillam uyintatheli engumakadebona nomqondisi wezocwaningo we-US Right to Know, iqembu elingenzi nzuzo labathengi. Mlandele I-Twitter @CareyGillam
Uphenyo lwethu, Abathandekayo U-Alex Malaspina, UBarbara Bowman, CDC, I-CDC Division ye-Heart Disease kanye ne-Stroke Prevention, UClyde Tuggle, Coca-Cola, UDavid Klurfeld, sikashukela, U-Ed Hays, ILSI, I-International Life Sciences Institute, UKathy Harben, ukukhuluphala, I-PepsiCo, USDA, Isevisi Yezocwaningo Lwezolimo ye-USDA